မင်း လူတွေကို မလိုအပ်ပဲ ရင်မဖွင့်မိစေနဲ့ - Amawpyay
တစ်ယောက်ထဲလည်း နေတတ်အောင်နေပါ… မင်း စိတ်ညစ်နေလား_?
ငါ ဒီလိုနေလို့ မဖြစ်ဘူး ဆိုပီး ကိုယ့်ဖာသာကို ပြန်ထိန်းပါ။ ဘဝအတွက် လေ့လာ သင်ယူ ပါ စာများများဖတ်ပါ သူများကို သွားပြောတာ ထက် အများကြီး သာတယ်။
ခဏလောက် အားရပါးရ ငိုချပစ် လိုက် ပါ။ ဘယ်သူ့မှ ပြောမနေနဲ့ ပိုးပြီး မျက်ရည်ကျအောင် လုပ်မဲ့သူပဲရှိတယ်။ ငိုစရာ ရှိတာ ကိုယ့်ဟာကို ငိုချလိုက် ပြီးရင် တည်ငြိမ် လာလိမ့် မယ်။
မင်း အရမ်း မွန်းကြပ်နေလား_?
သီချင်းလေး ဘာလေး နားထောင် စိတ်ပြေ လက်ပျောက်ဖြစ်အောင် နေပါ။ သူများကို သွားပြောရင် မွန်းကြပ်တာ ကနေ ထွက်ပေါက်ပါ ပိတ်သွား လိမ့်မယ် ။
ဘာအားငယ် စရာ ရှိလဲ စိတ်ဓာတ်ကျတာ မင်းအပြစ် မဟုတ်ဘူး လူတိုင်းကျ တတ်တာပဲ ကိုယ်တိုင် ပြန်ပီး ဆွဲမတင်နိုင်မှ မင်းအပြစ်ဖြစ်မှာ ဘယ်သူ့မှ အားမကိုးနဲ့ ကိုယ့် ကို ကိုယ် အားကိုး စမ်းပါ ။
လောကမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လောက် ဘယ်သူမှ မချစ်ဘူး ကိုယ့်အားကိုကိုး ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေးပါ။ မင်းမိဘက လွဲရင် မင်းကို ထိထိရောက်ရောက် ကူညီမဲ့လူ ရှားတယ် ။
မိဘကိုလဲ တစ်သက်လုံး ဘယ်တော့မှ ဒုက္ခပေးမနေနဲ့ မင်းကိုယ်မင်းပဲ အပြည့် အဝ ပြန်ပြီး ကူညီ လိုက် ပါ ။ မ လို အပ် ပဲ ဘယ် သူ ကို မှ လဲ ရင် မ ဖွင့် မိစေ နဲ့ ။
တဈယောကျထဲလညျး နတေတျအောငျနပေါ… မငျး စိတျညဈနလေား_?
ငါ ဒီလိုနလေို့မဖွဈဘူး ဆိုပီး ကိုယျ့ဖာသာကို ပွနျထိနျးပါ။ ဘဝအတှကျ လလေ့ာ သငျယူ ပါ စာမြားမြားဖတျပါ သူမြားကို သှားပွောတာ ထကျ အမြားကွီး သာတယျ။
ခဏလောကျ အားရပါးရ ငိုခပြဈ လိုကျ ပါ။ ဘယျသူ့မှ ပွောမနနေဲ့ ပိုးပွီး မကျြရညျကအြောငျ လုပျမဲ့သူပဲရှိတယျ။ ငိုစရာ ရှိတာ ကိုယျ့ဟာကို ငိုခလြိုကျ ပွီးရငျ တညျငွိမျ လာလိမျ့ မယျ။
မငျး အရမျး မှနျးကွပျနလေား_?
သီခငျြးလေး ဘာလေး နားထောငျ စိတျပွေ လကျပြောကျဖွဈအောငျ နပေါ။ သူမြားကို သှားပွောရငျ မှနျးကွပျတာ ကနေ ထှကျပေါကျပါ ပိတျသှား လိမျ့မယျ ။
ဘာအားငယျ စရာ ရှိလဲ စိတျဓာတျကတြာ မငျးအပွဈ မဟုတျဘူး လူတိုငျးကြ တတျတာပဲ ကိုယျတိုငျ ပွနျပီး ဆှဲမတငျနိုငျမှ မငျးအပွဈဖွဈမှာ ဘယျသူ့မှ အားမကိုးနဲ့ ကိုယျ့ ကို ကိုယျ အားကိုး စမျးပါ ။
လောကမှာ ကိုယျ့ကိုကိုယျလောကျ ဘယျသူမှ မခဈြဘူး ကိုယျ့အားကိုကိုး ကိုယျ့သမိုငျးကိုယျရေးပါ။ မငျးမိဘက လှဲရငျ မငျးကို ထိထိရောကျရောကျ ကူညီမဲ့လူ ရှားတယျ ။
မိဘကိုလဲ တဈသကျလုံး ဘယျတော့မှ ဒုက်ခပေးမနနေဲ့ မငျးကိုယျမငျးပဲ အပွညျ့ အဝ ပွနျပွီး ကူညီ လိုကျ ပါ ။ မ လို အပျ ပဲ ဘယျ သူ ကို မှ လဲ ရငျ မ ဖှငျ့ မိစေ နဲ့ ။